Gudoomiyaha cusub ee Barlamanka Somalia oo ka been sheegay aqoontiisa iyo buug+Cadeyn | Anti-Tribalism
← The New Speaker of the House, Mr. Jawari: a New Dawn for Somalia
Guul darada Galayr iyo Saamaynta Somaliland →
Gudoomiyaha cusub ee Barlamanka Somalia oo ka been sheegay aqoontiisa iyo buug+Cadeyn
Qoraalkaan ma xambaarsana ceebeeyn ujeedkeedu tahay in lagu waxyeeleeyo Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka laakiin nuxurkeedu wuxuu yahay in Mr Jawaari la dareensiiyo sida bulshada Soomaaliyeed wax walba u ogaan karto maadama lagu daalay in hogaamiyeyaasha loogu sacab tumo qiyaali,sheegashooyin beena iyo musuqmaasuqa.
Waxaa la joogaa Xilligii Xisaabi xil maleh,rabitaanka shacabka inuu shaqeeyana waxaa ka marqaati kacay sida dal iyo dibad looga taageeray guuldaradii Shariif Sakiin ka raacday siyaasadda Somalia.
30 August 2012 – Marka aan fiirino CV ga uu dhawaan ku soo daabacay Maxamed Cismaan Jawaari fan page ka uu ku leeyahay barta bulshada ee facebook, doorashadiisa ka dibna ay shaaciyeen warbaahinta Somalida waxaa ku cad in uu sameeyay publications ama buugaag uu qoray isaga. Waxaa ka mida buugaagta uu sheegtay in uu qoray Mr. Jawaari buug la yiraahdo BARASHADA FAGAAGGA SARE ADUUNKA. Hadaba buugaas uu sheegtay Mr. jawaari ma isagaa qoray? Halkaan ka akhri Buuga
Sida ku cad buugaas cover kiisa kore waxaa qoray nin Norwiij ah oo la yiraahdo Kjell-Erik Aas.
Waana buug ka hadlaayo cilmiga hawada sare ama space-ka waxa loo yaqaano oo ah maado xiriir la leh Astronomy -ga ama sida Somaliga lagu yiraahdo Cilmi falaga, waana buug laga dhigo dugsiyada sare ee Norway.
Hadaba buugaas waxaa marki dambe loo turjumay af Somali, si ardayda Somalida ah ee Norway dugsiyada sare ka dhigataa ay ugu fududaato in ay afkooda hooyo ku aqriyaan casharada. Waxaana buugaas turjumay oo turjumaadiisa loo xil saaray sida ku cad isla cover ka sare ee buuga Maxamed Cismaan Jawaari. Waxaa boga sare ee buuga ku qoran sida tan”Somaliska oversettelse: Mohammad Osman Jawari” Waa Af Norwiij macnaheduna waxa waaye “Turjumaada Somaliga ah waxaa iska leh Mohamed OSman Jawaari”.
Hadaba su’aashu waxay tahay qof ka turjumay buug luqad una turjumay luuqad kale, ma sheegan karaa in uu isaga qoray buugaas ? Jawaabtu waa maya, waxaana uu qof ku sheegan karaa kaliya buugi uu isaga hal abuurkiisa qoraal leeayhay. Buug aad turjumtay ama aad wax ka badashay ma noqon karo buug aad adiga qortay. Waxayna xad gudub ku tahay copyright ka, sidoo kale waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay in uu arinkas sameeyo Mr. Jawaari oo waliba soo bartay maadada qaanuunka. Akadeemiyada dhaxdeeda waxaa ceeb ku ah in uu qof sheegto howl uusan laheen asalkeeda ama qof kale uga horeeyaay waana wax qofka lagula tiigsan karo qaanuunka.
Waxaa kale oo la yaab leh in Mr. Jawaari uu qariyay magaca ninka buuga iska leh Kjell laakin uu iskuulki loo dabacay kaliya uu ku sheegay CV giisa . Waxaa kale oo is waydiintu tahay ma qori karaa Mr. Jawaari buug Astronomy ama cilmi falaga ka hadlaayo maadama aqoontiisu aaneey haba yaraatee la xaririn Astronomy balse ay tahay qaanuun? Taasna jawaabteedu way iska cadahay oo waa maya .
Mida kale oo ka sii yaab badan waa darajada “Professor” ee uu sheeganaayo ama uu ciwaan ka dhigtay Mr. Jawaari. Marka la fiiriyo Taariikh nololeedkiisa meelna ugama cada in uu noqday macalin jaamacad wax ka soo dhigay, sidoo kale darajada uu heesto waxaaa ugu sareeyo Bachelor Degree uu qaatay 1982 sida ku qoran CV giisa, waxaa kale oo isla CV giisa ku cad in uu noqday macalin dugsi sare oo uu ka ahaa wadankii uu ku noolaa ee Norway. Macalin Dugsi sare ma aha Macalin darajo sare leh (High ranking teacher) oo uu ku qaadan karo title ka professor.
Dadka qaar waxay dhihi karaan hadiiba uu Mudane Jawaari uu aqoonti iyo qibradi sidaas uga been sheegay, waxa uu mudane Jawaari soo wado iyo wabiga yaa wayn? hasse yeeshee sidaasi lama dhihi karo,waxayna rajadu tahay inuu horumar iyo cadaalad u horseedo dalka Somalia maadama uu noqday gudoonka Golaha sharci dejinta dalka Somalia.